.Lọ > Akụkọ > Akụkọ ụlọ ọrụ
Nka na ụzụ chọrọ maka machining akụkụ na mmiri
Ka amaghi ihe kpatara isi nkuku bu?
Isi nkuku bụ ngwa ngwa igwe eji eme ihe. Mgbe etinyere isi nkuku na akụrụngwa akụrụngwa, enwere ike ịgbakwunye usoro ntụgharị ntụgharị nke akụrụngwa ya na eriri ntụgharị ntụgharị iji hazie ihe nrụpụta.
Njirimara arụmọrụ na arụmọrụ nke igwe igwe gantry
Igwe igwe gantry nwere ihe siri ike, arụmọrụ dị elu, dị mfe ịrụ ọrụ, usoro dị mfe, arụmọrụ zuru oke na njirimara ndị ọzọ.
Mmezi nke igwe ihe igwe Gantry
Gantry igwe na-eduzi ndozi igwe: a na-ejikarị ígwè ma ọ bụ ihe nkedo na-arụ ọrụ igwe igwe, ụdị nduzi a na-akọ ọkọ, kwesịrị idozi ya, ma ọ bụghị na ọ ga-eme ọkọ.
Banyere igwe igwe gantry
Igwe igwe gantry, mkpụmkpụ maka igwe gantry, bụ oghere ọnụ ụzọ na akwa akwa dị ogologo nke igwe igwe.
Otu esi edozi igwe igwe gantry
Gantry igwe igwe n'ozuzu mejuputara gantry, gantry mejuputara okpukpu abuo, ogidi, ichikota uzo, nkpu ulo, nkpuchi na isi ebule bu uzo siri ike.